Isisombululo seGumbi leNkomfa | Brocade Smart Space Technology Co., Ltd. zitshintshi
Igumbi lokuhlangana lanamhlanje ligcwele ngabantu abanezixhobo ezahlukeneyo ezineendlela ezahlukeneyo zokufaka. Bonke baya kufuna ukudibanisa, ukuza kunye nokusebenzisana. Kuyimfuneko ukuba olu nxibelelwano lukhawuleze kwaye lubenomdla ngokudluliswa kwedatha okuzinzileyo kwaye kulula ukwabelana ngayo.
I-Brocade ibonelela ngezisombululo ezinamacala onke kunye ezingenazingcingo kumashishini kunye namaqabane. Sisebenzisa iteknoloji ye-HDMI ukuguqula igumbi lenkomfa libe yindawo efanelekileyo yokusebenza kunye nemveliso.
Isisombululo esinentambo: Isisombululo seGumbi leNkomfa kunye ne4K HDMI Extender kit
Isisombululo segumbi leenkomfa esine-Brocade 4K HDMI Extender-DK02 senzelwe ukuba sifikeleleke, kube lula ukusifaka, sinobuchule bokusebenzisa, kwaye sisebenza ngokukuko njengomboniso kunye nesisombululo segumbi esibonakalayo solawulo lweempawu. Isisombululo siza nesidlulisi sedesktop esine-1 HDMI igalelo, isamkeli esonyuswe udonga esine-1 HDMI imveliso, iiadaptha ezi-2 kunye nonxibelelwano lwentambo lweCat5e / 6. Esi sisombululo sikwabandakanya umthombo wesiginali njengekhompyuter ene-1 HDMI izibuko ukusuka kwidesktop kunye nesiboniso esine-1 HDMI izibuko kwinkomfa. Iinkcukacha ngumthumeli odibanisa ikhompyuter ngentambo ye-1 HDMI kwaye uqhagamshela isamkeli ngentambo eyi-1 Cat5e / 6, ngelixa umamkeli edibanisa umboniso ngentambo ye-1 HDMI kwaye uqhagamshela umthumeli ngentambo efanayo yeCat5e / 6. Ngetekhnoloji ye-HDMI, ikiti inokudlulisa ividiyo ye-4K / 60hz UHD iye kwi-197 yeenyawo ngelixa imiqondiso ye-1080p inokuya kwi-393 yeenyawo. Isisombululo segumbi leenkomfa esinentambo ye-DK02 sithatha indawo yoyilo kunye nomsebenzi wofakelo kwaye sisisombululo esifanelekileyo kwimarike yetekhnoloji ye-AV.
Isisombululo esingenazingcingo: Isisombululo seGumbi leNkomfa kunye ne-Wireless HDMI extender kit
Isisombululo segumbi leenkomfa ngaphandle kwamacingo i-Brocade engenantambo ye-Brocade sisisombululo esifanelekileyo kumagumbi enkomfa. Isisombululo siza nesidlulisi sedesktop esine-1 HDMI igalelo, isamkeli esonyuswe eludongeni kunye nokukhutshwa kwe-1 HDMI kunye neeadaptha ezi-2. Esi sisombululo sikwabandakanya umthombo wesiginali njengekhompyuter ene-1 HDMI ukusuka kwidesktop kunye nesiboniso esine-1 HDMI kwizimvo zenkomfa. Iinkcukacha ngumthumeli odibanisa ikhompyuter ngentambo ye-1 HDMI ngelixa umamkeli eqhagamshela umboniso ngentambo enye ye-HDMI. Nge-HDMI kunye netekhnoloji ye-WIFI engenazingcingo, ikiti inokudlulisa ividiyo ye-4K / 30hz UHD iye kwi-197 iinyawo ngelixa imiqondiso ye-1080p inokuya kwi-656 yeenyawo. Ilula kakhulu ukusebenza. Vele ufake iplagi kwaye udlale. Akukho fakelo lomqhubi olufunekayo. Nge-CTS200 unokwabelana ngezinto ezikwizixhobo zakho ezahlukeneyo kwiscreen sokubonisa ngonqakrazo olunye.